Maleeshiyaad Amxaara ah oo dad muslimiin ah ku xasuuqay magaalada Gonder.
Thursday April 28, 2022 - 11:50:32
Wararka ka imaanaya wadanka Itoobiya ayaa sheegaya in xasuuq daran loogeystay dad muslimiin ah oo ku sugan waqooyiga wadankaasi.
Maleeshiyaadka ismaamulka Amxaarada ee loo yaqaan Fano ayaa labaatameeyo qof muslimiin ah ku gummaaday magaalada Gonder ee katirsan gobolka Amhara.
Madaxa golaha Islaamiga Itoobiya ayaa warsaxaafadeed uu soo saaray ku sheegay in xasuuqa Gonder ay geysteen ciidamada gaarka ah ee ismaamulka Amhara,maleeshiyaad deegaanka ah iyo xagjirayaal Nasaara ah oo ku xiran mid kamida Kaniisadaha waaweyn ee magaalada Gonder.
Ciidamo aad u hubaysan ayaa xoog kugal masaajid, Madaaris diinta lagu barto iyo guryo ay deganaayeen dad muslimiin ah waxayna halkaas ku xasuuqeen ugu yaraan 22 ruux oo ay kamid yihiin haween iyo carruur.
Qaar kamid ah dadkii ka badbaaday xasuuqan ayaa warbaahinta u sheegay in maleeshiyaadka Amxaarada ee gummaadka geystay ay kufsi wadareed kula kaceen dumar muslimaad ah.
Salmaan oo kamid ah golaha muslimiinta Itoobiya ayaa atbaacda kaniisadda Georgios ee Gonder ku eedeeyay in ay qeyb ka ahaayeen xasuuqa ayna gubeen dhowr markaz oo muslimiintu leeyihiin.
Muslimiinta aqaliyadda ku ah gobolka Amhara ayaa sanadadii lasoo dhaafay gabood fallo kala kulmayay dadka Nasaarada Amxaarada Xabashida ah.